Mankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Yoga, fomban-drazana Indiana fahiny, ny olona manerana izao tontolo izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2021 5:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, English
(Lahatsoratra tamin'ny volana Jona 2017)
Andro iraisam-pirenena ho an'ny Yoga 2015. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'ny mpisera Narendra Modi. CC BY-SA 2.0
Tamin'ny 21 Jona tamin'ity taona 2017 ity, olona ana hetsiny maro tany amin'ny firenena maherin'ny 200 manerana izao tontolo izao no nankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga tamin'ny fanaovana Yoga miaraka teny an-kalamanjana. Feno ny sarin'ireo olona manao yoga sy ny tenirohy #InternationalYogaDay izay nalaza nandritra ny andro ny sehatry ny tambajotra sosialy manerana an'izao tontolo izao.
Azo raisina ho toy ny fanazarana na fifehezana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy izay nipoitra tany India fahiny (teo anelanelan'ny taonjato fahenina sy fahadimy Talohan'ny vanim-potoana ankehitriny) ny yoga. Nampiditra ilay fanazarana tany Andrefana tamin'ny faran'ny taonjato faha-19 sy ny fiandohan'ny taonjato faha-20 ny goròn'ny yoga avy any India ary efa indostria manana miliara dolara manerantany izy ankehitriny. Na dia malaza ho rafitra fanazaran-tena ara-batana aza ny yoga any amin'ny ankamaroan'ny tontolo Andrefana, any India kosa dia mihoatra lavitra noho izany izy; manana fototra fisaintsainana sy ara-panahy izy io.
Firenena maro izay tsy mahalala ny fiteninay, ny fomban-drazanay na ny kolontsainay, no mifandray amin'i India ankehitriny amin'ny alàlan'ny Yoga. Mampifandray ny vatana sy ny saina ary ny fanahy ny yoga. Mitana andraikitra lehibe ihany koa izy amin'ny fampiraisana an'izao tontolo izao. Hoy ny Praiminisitra Indiana Narendra Modi, 21 jona 2017.
Tamin'ny taona 2014, Narendra Modi no lasa praiminisitra faha-14 tao India ary nanomboka nitarika ny hetsika mba hanaovana indray ny Yoga ho ampahany manan-tantara amin'ny kolontsaina Indiana. Tamin'ny volana Septambra tamin'io taona io, nanao antso izy ho an'ny firenena hafa tao amin'ny Fivoriambe'ny Firenena Mikambana (UNGA) mba hankalazana ny yoga manerantany amin'ny andro iray. Tamin'ny volana Desambra 2014, nisy ny fanapahan-kevitra nolaniana tao amin'ny UNGA hanamarihana ny 21 Jona ho Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga, izay ankalazaina manerantany nanomboka tamin'izay.
Tamin'io taona io ihany, nanamafy ny fifantohany tamin'ny Yoga ny governemanta Modi tamin'ny fanendrena minisitra ho an'ny Yoga sy ny fitsaboana nentim-paharazana. Tafiditra tao anaty lisitry ny vakoka ara-kolontsainan'ny UNESCO tsy tsapain-tanana ny Yoga tamin'ny 1 Desambra 2016.
Yoga, vakoka fahiny sady teknolojian'ny fahasalaman'ny hoavy
Ireto misy sary vitsivitsy izay avy any India androany mampiseho ny sarangan'olona samihafa mankafy ilay andro:
Zava-bita tsara indrindra tamin'ny Guinness World tamin'ny yoga lehibe indrindra manerantany teto Ahmedabad androany
Manafaka ny sainao sy ny fanahinao ny Yoga. Manadio ny vatanao izy io. Nankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga tao Dimapur.
Fahafinaretana lehibe ny nanao #Yoga tamin'ny andro fahatelon'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga niaraka tamin'ireo olona mafana fo tao Howarh, Bengal Andrefana
Tafika avy amin'ny CISF sy BSF, antitra, tanora, hery mahavariana avy amin'ny Yoga!
Nampiasaina tamin'ny fanoherana ny governemanta mihitsy aza ny Yoga:
Ireo tantsaha manao ny Shavaasana ho fanoherana ny governemanta; Fihetsiketsehana nataon'ny kongresy hanoherana ny fahafatesan amaro tao Mandsaur
Mpiasa ao amin'ny kongresy manao ny ‘Shavaasana’ amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga
Tamin'ity taona 2017 ity, niitatra tamin'ny firenena maro kokoa manerantany ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga:
Fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga tany Israely
Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga tao amin'ny zaridaina Burj, Dubai, Emira Arabo Mitambatra.
An'arivony no nandray anjara tamin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga tany Bangladesh.
Olona 3000 mahery no nandray anjara tamin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga tany Suva, Fidji.
Ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga sy ny Fahaiza-miaina tao Machu Picchu, Pero
Hazavana tsy ho faty mihitsy rehefa mirehitra indray mandeha ny Yoga.
Topimaso kelin'ny foibe malazan'ny ONU mirehitra jiro tamin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga.
Nizara sary manentana mampiseho azy ireo manao Yoga tao amin'ny tambajotra sosialy ihany koa ireo olo-malazan'i Bollywood.
Fanazaran-tena manokana sy ho an'ny tsirairay ny Yoga, ny mpitsabo ihany no mamaritra azy ny heviny sy ny tombony azo avy aminy. Ary ity fanentanana iraisana amin'ny fanaparitahana ny yoga any amin'ny firenen-kafa eran'izao tontolo izao ity dia tokony hitondra tombony lehibe ho an'ireo mpampiasa an-tapitrisany an'ity fomba fanao Indiana fahiny manerana izao tontolo izao ity.
4 herinandro izayIndia